Mampiofana mpampihorohoro tokoa ve ny Ivontoerana Ravinala (sy ny Light International) Eto Madagasikara?
2016-08-04 @ 09:35 in Kolontsaina
Nandeha tao amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra ny fiampangan'ny masoivoho tiorka ny fikambanan'olon-tsotra tiorka roa eto Madagasikara ho manana fifandraisana na mahazo famatsiambola avy amin'ny fikambanana lazaina ho mampihorohoro. Ny sekoly Light International sy ny Ivontoerana kolontsaina sy ifanakalozan-kevitra Ravinala ireo fikambanana roa voalaza ireo. Tsy mbola nisy zavatra toy izao mihitsy hatramin'izay, hoy ny jeneraly Ramakavelo, hoe ny masoivoho avy any aminy ihany no miampanga ireo toeran-kolontsaina mba manana ny laza tsarany ho tohanan'ny mpampihorohoro.
Ny fahafantarana ny toe-java-misy anefa no ahafahana mamoaka fa fifandroritana ara-politika no ao ambadik'izao fiampangana, nahatafintohina ny fikambanana avy any aminy izao. Mpiara-dalàna ara-politika tamin'ny fitondrana ry Fethullah Güllen teo aloha, fa tsy miankina amin'ny fitondrana. Manana tambajotra mampiroborobo ny fanabeazana sy ny fifanakalozan-kevitra io tambajotra io ao amin'ny "fisantaran'andraikitra Hizmet".
Noho ny kazarana tanjona tsara dia tsara, sady tanterahin-dry zareo avy hatrany tsy voatery haka fahefam-pitondrana ara-politika izany, dia ahian'ny eo amin'ny fitondrana ho takona ny ezaka fampivoaram-pirenena tanterahin-dry zareo izay tena misy tokoa sady tsy takona afenina. Lasa misy noho izany ny faminganana, nefa inona no atahorana raha samy mikaroka ny mahasoa ihany?
Na dia vahiny aza ilay fikambanana, dia nalahelo ihany ny tena ka niezaka ny hamonjy ny famelabelaran-kevitra niarahana tamin'ny mpanao gazety nataon-dry zareo tao amin'ny foiben-toerany tao Andavamamba. Tsy nahatratra ny fanombohany aho fa izay hitako ihany, sy tsikaritro no ampitaiko aminareo, tsy manana fandraisam-peo aho, ary hita any amin'ny haino aman-jery ihany ny votoatin-dresaka tamin'izany fotoana izany.
Inona no mahaliana ny ivontoerana Ravinala?
Ny hevitra sy ny tetikasa miompana amin'ireto lohahevitra ireto no mahaliana azy ireo:
- Mari-panondroana sy Fidirana tsy manankorontana ny firindran'ny fiarahamonina
- Fanabeazana, tontolo ara-piarahamonina
- Zon'olombelona sy fahalalahan'olom-pirenena
- Fifampiresahana eo amin'ny kolontsaina samihafa sy antokom-pivavahana samihafa
- Famahana olam-pifandirana, fandriamapahalemana ary fanelanelanana
- Fanatontoloana sy fahasamihafana ara-kolontsaina.
Araka ny efa nambarako tetsy ambony dia te-hampiely ny taratra avy aminy eo amin'ny fireneny sy ny sehatra manerantany ireo fikambanana mpanara-dia an'i Fethullah Güllen. Tsy miafina amin'izany izy ireo fa ny tsy ankasitrahany dia ny filazana ny tambajotran'i Fethullah Güllen ho fikambanana mpampihorohoro na mpamatsy mampihorohoro.
Avadika ny resaka, avadika ny taria fa mba hilaza kely ny lahatsoratra tany ambadika tany aho. Hoy ny nolazainy hoe mizaka ny fahadisoana ara-politika nataon'ny Britanika tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 isika amin'izao fotoana izao satria notadiavin'ny Britanika ny fomba rehetra hamotehana ny taratra Ottoman (niavian'i Torkia). Ilay Kalifà tamin'izany fotoana izany no nopotehina, efa nanana fisokafana ho amin'ny modernisma anefa ny kalifà tamin'izany.
Rehefa potiky ny Britanika ny Kalifà tao Torkia dia vondrona tery saina tanteraka avy ao Arabia Saodita tamin'ny wahabisma nentiny no nandrombaka ny toerany teo amin'ny tontolo silamo. Io wahabisma io no nentin-dry Al Qaeda, ry Taliban, ry Boko Haram ary ry ISIS ireny. Noho ny fikarohana tombontsoa ara-toekarena, noho ny solika, tamin'izany fotoana izany no namotehana ny Kalifà fa ny vokatr'izany dia ny fahateren-tsaina araka ny fijery tandrefana sy izao fampihorohoroana mieli-patrana izao. Tadidio fa ny fomba fitsarana ao Arabia Saodita ireny tanterahin'ny vondrona islamista manapa-doha ireny.
Naharesy lahatra ahy ihany izany lahatsoratra izany, na dia tsy hitako aza ny fatiny, ka izay no nahatonga ahy hanoratra izany etoana.
Hiverina amin'ny resaka voalohany teo indray aho. Ny andrasan'ireo fikambanana roa mpiara-dia amin'i Güllen afvy amin'ny masoivoho Tiorka Volkan Turk Vural dia ny porofo avy amin'ny fitondrana Tiorka entin'ny AKP fa mampiofana mpampihorohoro ry zareo. Any an-tsesintany any Etazonia kosa i Fethullah Güllen, izay nampangaina ho tao ambadiky ny fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny 15 jolay 2016, mangataka ny hananganana vaomieram-pamotorana iraisampirenena tsy mitongilana. Nolazainy fa raha misy porofo mazava ny maha-tao ambadiky ny fanonganam-panjakana azy, izay nomelohiny, dia vonona izy ny hiatrika ny vokatr'izany.
Ny zavamisy ny betsaka ny olona voaroaka tamin'ny asany, na tao amin'ny miaramila, na polisy, fampianarana (an'arivony ny sojabe voaroaka), fitsarana, fahasalamana, fampitam-baovao ary orinasa tsy miankina hafa. Mariho fa fantsona fahitalavitra miisa 16, izay akaiky ny vondrona Gülleniste no nesorin'ny Vaomieran'ny haino aman-jery tsy ho ao amin'ny Türksat intsony ary mpanao gazety 24 no nosamborina. Izany no mahatonga ahy somary nitodika kely tany amin'ny 2009 teto Madagasikara ary hieritreritra fa nahomby ilay sarinadim-panonganana nataon'ny miaramila hanilihana izay rehetra mpanohitra ny fitondran'Atoa Racep Tayyip Erdogan tsy ho ao amin'ny asam-panjakana rehetra.
Dia samia mamisavisa!
4 aogositra 2016